အဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုကွန်ပျူတာကနေကိုထိခိုက်မျက်စိ - WINDOWS ကို - 2019
တသောင်းတစ်နေ့ခြေလှမ်း - သင်တို့ကိုအသွင်သဏ္ဌာန်၌ဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်ရှောက်သွားဖို့လိုအပ်ဘယ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုတွက်ချက်ဖို့ဘယ်လို? သင်တို့နှင့်အတူအစဉ်အမြဲပြီးသားဖြစ်သည့်စမတ်ဖုန်းရှိသောကွောငျ့ဤသည်သေချာပေါက်, ကြံ့ခိုင်ရေးလက်ကောက်များအတွက်စတိုးဆိုင်ကို run မထားဘူး။ Built-in accelerometer မှကျေးဇူးတင်ပါသည်ဖုန်းများဒီတာဝန်နှင့်အတူအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ပါ။ လျှောက်လွှာသော့ခတ်ရလဒ်များကို - လိုအပ်ကြောင်းအားလုံး။ ဒါဟာ (ထိုအမှားများကိုအစဉ်အမြဲရှိ) ကိုဒေတာ 100% မှာတိကျကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုခြုံငုံရုပ်ပုံဖန်တီးကူညီပေးပါမည်။ မရရှိလျှင်ဒါနေ့ကိုတစ်ဦးတက်ကြွခဲ့, - - ခြေလှမ်းများတွေအများကြီးပါလျှင်ကအိပ်ရာကိုချွတ်ရနှင့်လမ်းလျှောက်သွားကြဖို့အချိန်ပါပဲ။ ဒီတော့ရဲ့အဘယ်အရာကို applications များ, pedometer ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ဘာတွေကောင်းကိုတွေ့မြင်ကြကုန်အံ့။
အဓိကအားသာချက် - ဘက်ထရီသက်တမ်းနဲ့ GPS နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမကွန်နက်ရှင်လည်းမရှိသည့်နေရာများအတွက်သုံးစွဲဖို့စွမ်းရည်ချွေတာ။ အဆင့်များရေတွက်ဖို့လျှောက်လွှာစမတ်ဖုန်းအာကာသရွေ့လျားအကြောင်းကိုဒေတာအသုံးပြုသည်။ ဆုံးရိုးရှင်းတဲ့ interface နဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏နိမ့်ဆုံး။
တစ်ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်, သင်တစ်ပတ်အပေါင်းတို့နှင့်အချိန်အဘို့သင့်တိုးတက်မှုကိုခြေရာခံနိုင်ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်ချက် "ပုဂ္ဂလိက mode ကို" ယင်းပရိုဖိုင်းကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်။ ကဖွင့်ခြင်းဖြင့်, သင်သည်အခြားအသုံးပြုသူများနှင့်အတူအောင်မြင်မှုများဝေမျှဖို့နီးပါးထံမှအစီရင်ခံစာများကိုလက်ခံရရှိရန်သို့မဟုတ်ငါးများအတွက်မိတ်ဆွေတစ်ဦးမှပေးနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပန်းတိုင်အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ ယင်း၏သိသာရိုးရှင်းနေသော်လည်း Num - ရေတွက်ခြေလှမ်းများနှင့်အဘို့ကြီးစွာသော tool ကိုထိုမှတပါး, လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။
Fit ကို google
ဒီ app ၏ကျယ်ပြန့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုသငျသညျလုံးဝနီးပါးမဆိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုခြေရာခံများနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုတင်ထားရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ Google ကြံ့ခိုင်မှု, သင်နာရီနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးလက်ကောက်အပါအဝင်အခြား application များနှင့်ကိရိယာအမျိုးမျိုးဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်မှာ, သင်သည်အခြား tools တွေနဲ့အများစုဖုန်းပေါ်မှာ, ဒါပေမယ့်လည်းအွန်လိုင်းပေါ်တယ်ပေါ်တွင်သာရလဒ်ကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
တဦးတည်းအဆင်ပြေပြေနဲ့လှပသောလျှောက်လွှာအတွက်ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့လူနေမှုပုံစံ (အိပ်ပျော်ခြင်း, အစားအစာစားသုံးမှု, ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု) နှင့်ဆက်စပ်သော data အားလုံးကိုကြည့်ရှုရန်ပိုနှစ်သက်သောသူတို့က, အဘို့။ အားနည်းချက်: တစ်စက်ဘီးအဖြစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှတ်တမ်းများအပေါ်တစ်ဦးခရီးစဉ်။
Google ကြံ့ခိုင်မှု Download
အသုံးပြုရလွယ်ကူတယ်, ပိုမိုဘာမျှမ။ အနက်ရောင်နောက်ခံနဲ့ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားနှင့်အရောင် display ကိုအခြေခံအချက်အလက်များ၏တောက်ပစက်ဝိုင်းနှင့်အတူရိုးရှင်းသော interface ကို: ခြေလှမ်းများ၏နံပါတ်နှင့်အရပ် (သင်ကယ်လိုရီအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ထည့်နိုင်သည်) ။
ဒီ app လှုပ်ရှားမှုခြေရာခံစောင့်ရှောက်, မြေပုံပေါ်တွင်သင်ဖြစ်ရပြီရာအရပ်မှတ်သားသည်။ နည်းနည်းချိန်ညှိခြင်း - ပဲသင်လိုအပ်သောအရာကို။ တကယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထက်တစ်ဦးစက်ဘီးအဖြစ် Google ကြံ့ခိုင်မှု, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှတ်စုမတူဘဲ။ အားနည်းချက်: အင်္ဂလိပ်အကူအညီနှင့်ပံ့ပိုးမှု, (ဥပမာ Samsung Galaxy Note II ကိုကဲ့သို့) အချို့စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေအဖြစ် accelerometer နောက်ခံပိတ်ထားရသည်။ အခမဲ့, ကြော်ငြာမပါ။
ယခင် pedometer မတူဘဲ, ကအများကြီးပိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပေးထားပါတယ်။ ပထမဦးစွာပြုလုပ်ကိုယ်တိုင်အရှိဆုံးတိကျမှန်ကန် data တွေကိုရယူဖို့ sensitivity ကိုနှင့်ခြေလှမ်းအရှည်ကိုထိန်းညှိဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယအနေရွေးချယ်ဖို့နေရာလေးကို widget က4သင် app ကိုဖွင့်လှစ်ရန်မလိုဘဲအခြေခံသတင်းအချက်အလက်များကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုလျက်ရှိ၏။
ကိုယ့်အခြေခံ settings ကိုရိုက်ထည့်ပါနှင့်သင်မထိုက်မတန်စောင့်ရှောက်ဖို့တစ်ရက်ဖြတ်သန်းသွားဖို့လိုအပ်မည်မျှခြေလှမ်းများထွက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါစာရင်းအင်းအပိုင်းကွဲပြားခြားနားသောအချိန်ကြားကာလများအတွက်ရလဒ်များဂရပ်များပြသပေးပါတယ်။ ဒေတာအားလုံးကိုတစ်ဦးမှတ်ဉာဏ်ကဒ်, ဒါမှမဟုတ် Google Drive တွင်တင်ပို့နိုင်ပါတယ်။ ရေချိုးခန်းနှင့်မီးဖိုချောင်မှခရီးစဉ်များထည့်သွင်းစဉ်းစားကြသည်မဟုတ်ဒါ counting, ပထမဦးဆုံး 10 ဦးခြေလှမ်းများပြီးနောက်စတင်ခဲ့သည်။ ဒီ app ကြော်ငြာလည်းမရှိ, အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
pedometer Accupedo Download
ကိုယ်အလေးချိန် Pacer များအတွက် pedometer
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်အဖြစ်, ဒီရုံ pedometer နှင့်အလေးချိန်ကိုထိန်းချုပ်မယ့်ပြီးပြည့်စုံသော tool ကိုမဟုတ်ပါဘူး။ သင်က parameters များကိုသတ်မှတ်ပြီးရည်မှန်းချက်ကိုသတ်မှတ် (သို့မဟုတ်ပုံစံ၏လှုံ့ဆျောမှုထိနျးသိမျးထိန်းသိမ်းနည်းဖို့အထူးဒီဇိုင်းရည်ရွယ်ချက်များကိုသုံးပါ) နိုင်ပါတယ်။ Akyupedo ၌ရှိသကဲ့သို့, ဒေတာရှင်းလင်းချက်များအတွက် function ကို setting တစ် sensitivity ကိုလည်းမရှိ။
အများဆုံးအခြား application ၌ရှိသကဲ့သို့, Peyser ပြင်ပကမ္ဘာနှင့်အတူချိတ်ဆက်မှုဖြစ်ပါသည်, သငျသညျပူးတွဲလေ့ကျင့်ရေးအတှကျအမိသားစုဝင်များနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူအုပ်စုများဖန်တီးသို့မဟုတ်အခြားအသုံးပြုသူများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ခြေလှမ်းများနှင့်ကယ်လိုရီ၏နံပါတ်ခြေရာခံ functions အလေးချိန်လေ့ကျင့်ရေး၏ထိရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ကောက်ချက်ဆွဲရန်ခွင့်ပြုသည်။ main features တွေအခမဲ့ pedometer များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ပိုများသော In-depth ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အထူးဒီဇိုင်းရေးဆွဲလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်တွင်အခပေးစာရင်းသွင်းပါဝင်သည်။
pedometer ကိုယ်အလေးချိန် Pacer များအတွက် Download
လုံးဝထည့်သွင်းစဉ်းစားရဆုံးကတခြား applications များမှမတူဘဲ, ရုရှ၌တည်၏။ အဓိက window ထဲမှာအချက်အလက်တွေအားလုံးကိုဖော်ပြပေး: ခြေလှမ်းများ၏နံပါတ်, ကယ်လိုရီ, အကွာအဝေး, အလှုပ်ရှားမှု၏မြန်နှုန်းနှင့်အချိန်။ အရောင်အစီအစဉ်အတွက် setting တွင်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ နွမ်နှင့် Accupedo မှာတော့ခြေလှမ်းများ၏နံပါတ်ကိုယ်တိုင်ထဲသို့ဝင်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦး function ကိုလည်းမရှိ "Share" လူမှုရေးကွန်ရက်များတွင်ရလဒ်ထုတ်ပြန်ဖို့။ အလိုအလျှောက်စတင်နှင့်ရပ်တန့် function ကိုသင်ညဥ့်နေစဉ်အတွင်းစွမ်းအင်ကယ်ဖို့တစ်နေ့တာအတွင်းသာခြေလှမ်းများရေတွက်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ တစ်ဦးကအဆင်ပြေပြေနဲ့အရည်အသွေးမြင့် pedometer 4.4 ပျမ်းမျှရမှတ်နှင့်အတူ 300 ကျော်သန်းသည်အသုံးပြုသူများအကဲဖြတ်။ အခမဲ့, ဒါပေမယ့်ကြော်ငြာလည်းမရှိ။
ခရီးသွားများအတွက်, တောင်တက်နှင့်သဘာဝစူးစမ်းရှာဖွေသူများ၏မိတ်ဆွေတို့ကိုများအတွက်စံပြ။ ဒီ app ခြေလှမ်းများရေတွက်နှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်တောင်တက်လမ်းကြောင်းဖန်တီးသို့မဟုတ်အခြားအသုံးပြုသူများစောင့်ရှောက်သောမြားကိုအသုံးပွုဖို့အဆိုတင်သွင်းမသာ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဒါဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရေကြောင်းဖြစ်ပါသည် - app ကိုသင်တစ်ဦးကကင်မရာဖုန်းပေါ်မှာသူတို့ကိုပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရာဝတ္ထုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်ခွင့်ပြု, တိုးပွားအဖြစ်မှန်နည်းပညာကိုအသုံးပြုပါတယ်။
ဒါဟာ Android Wear နှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်နှင့်ခရီးထွက်အကွာအဝေးဆုံးဖြတ်ရန်ဖုန်းရဲ့ GPS စနစ်အသုံးပြုသည်။ သူတို့ရဲ့ရလဒ်များကိုသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူမျှဝေနိုင်ပါသည်။ သဘာဝကိုခံစားရန်ပိုနှစ်သက်သူများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုစီခြေလှမ်းရေတွက်ပေါ် နေ. မရခဲ့ပေ။
ViewRanger ကို download လုပ်ပါ
တစ်ဦး pedometer ချိန်ညှိခြင်း, နောက်ခံမှန်ကန်သောစစ်ဆင်ရေးများအတွက်ဘက်ထရီချွေတာ setting တွင်ခြွင်းချက်၏စာရင်းတွင်ထည့်သွင်းရန်မေ့လျော့ကြပါဘူး။